ကိလေသာကင်းစင် ဘုရားရှင် မြဲပင် ရှိခိုးပါ၏။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီးနှင့် မဟာမြိုင်ဆ၇ာတော် ဦးဇောတိက
သာသနာဟူသည် သာသန (န)(√သာသ်+သု)
• အမိန့်အာဏာထားခြင်း။ ဟူ၍ ဦးဟုတ်စိန်အဘိဓာန်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗုဒ်ဓကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်၍ ဗုဒ်ဓသာသနာ=မြတ်ဘုရားအဆုံးအမတော်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရသည့် ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မြတ်ဘုရား၏အဆုံးအမတော်ကား အဘယ်အရာနည်း။ သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။
မြတ်ဘုရား၏ အဆုံးအမတော်ကား ဓမ္မပင်တည်း။ ထိုဓမ္မသည် အကျယ်အားဖြင့် ဓမ္မက္ခန်ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိ၏။ (မှတ်ချက်။ ။ဓမ္မက္ခန်ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ကို အစွဲပြုပြီး သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးသည် စေတီပေါင်း 84000၊ ရေတွင်းရေကန်ပေါင်း 84000 စသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူ၏။)
ထိုဓမ္မက္ခန်ဓာပေါင်း84000ကို တူရာတူရာ စု၍ အနှစ်ချုပ်အရကောက်သော် သုတ် ၊ ၀ိနည်း ၊ အဘိဓမ္မာ ဟူသောတိပိဋက သုံးပုံ ရ၏။
ထိုတိပိဋက သုံးပုံကို တူရာတူရာ စု၍ အနှစ်ချုပ်အရကောက်သော် ဗောဓိပက္ခိယတရား (၇)ပါး ရ၏။
ထိုဗောဓိပက္ခိယတရား (၇)ပါးကို တူရာတူရာ စု၍ အနှစ်ချုပ်အရကောက်သော် မဂ်ဂင် ရှစ်ပါး ရ၏။
ထိုမဂ်ဂင် ရှစ်ပါးကို တူရာတူရာ စု၍ အနှစ်ချုပ်အရကောက်သော် သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဟူသော သာသနာသုံးရပ် (တနည်း) သိက္ခာသုံးပါးရ၏။
(ထိုသိက္ခာသုံးပါးကို အနှစ်ချုပ်ကား သတိတရားပင်တည်း။)
သိက္ခာဟူသည် သိက္ခာ (ဣ)(√သိက္ခ်+အာ)
• ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။ ဟူ၍ ဦးဟုတ်စိန်အဘိဓာန်တွင် ဖော်ပြထားပေးရာ မြတ်ဘုရား၏အဆုံးအမဖြစ်သော အကျယ်ကိုမလေ့လာနိုင်စေကာမူ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သော သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ သာသနာသုံးရပ်ကို သင်ယူခြင်း၊ ဖြည့်ကျင့်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်များ၏ အရေးကြီးဆုံးသော အခြေခံလိုအပ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။
ထို သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ သည် လှေကားထစ်သဖွယ် ဆက်နွယ်နေ၏။ ဆက်နွယ်ပုံကား.........
သီလ မရှိလျှင် သမာဓိ မရှိနိုင်။
မည်သည့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမဆို ရှင်ကျင့်ဝတ်စာအုပ်ကို ရှင်သာမဏေ၊ရဟန်းကောင်းများ ကျက်မှတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုစာအုပ်၏နောက်ဆုံးတွင် ၁။ အသုဒ်ဓသီလော ဒုပ္ပညော ၊ စိတ္တေကဂ်ဂံ န၀ိန္ဒတိဟူ၍ ပါရှိသည်။ ဆိုလိုချက်ကား သီလမစင်ကြယ်သော ပညာကင်းမဲ့သူသည် (သီလမရှိသူသည်။) စိတ်၏ငြိမ်သက်တည်ကြည်ခြင်း(သမာဓိ)ကို မရရှိနိုင်။
ဗုဒ်ဓကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အနည်းဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားငါးပါး = လူကျင့်ဝတ်ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းရ၏။
ထိုတွင် လူသတ်မှု=ပါဏာတိပါတကံ သီလကျူးလွန်သူ၏စိတ်သည် ငြိမ်သက်ခြင်း၊ တည်ကြည်ခြင်း သမာဓိမရှိနိုင်။ နောင်တမလွန်ဘ၀ကိုမဆိုထားဘိ.. ယခုကျူးလွန်ပြီးခဏတွင်ပင် ရာဇ၀တ်ဘေးကို တွေးကြောက်၍ မျက်နှာမသာမယာဖြစ်ကြရသည်။၊ လူအများအလယ်တွင် တည်တည်ကြည်ကြည် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် မရှိနိုင်။
ထိုကြောင့် အောက်ထစ်ဆုံး အခြေခံဖြစ်သော သီလလှေကားထစ်ကို မနင်းဘဲ ထိုထက်မြင့်သောသမာဓိလှေကားထစ်ကို မတက်လှမ်းနိုင်။ ၀ လုံးမရှိဘဲ ၀ိ ဆိုသောအက္ခရာကို ရေး၍ မရသကဲ့သို့ပင်။
၂။ ၀ိက္ခိတ္တစိတ္တော နေကဂ်ဂေါ ၊ သမ္မာဓမ္မံ န ပဿတိ ဟူသော စာကြောင်း၏ဆိုလိုချက်ကား မတည်ကြည်သော ပြန့်လွင့်သောစိတ်ရှိသူသည်(သမာဓိမရှိသူသည်) သူတော်ကောင်းတရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မသိ မမြင်နိုင်(ပညာရှိမဖြစ်နိုင်)။
စိတ်မတည်ကြည်ဘဲ ဟိုတွေးဒီတွေး ဖြစ်နေချိန်တွင် ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားတို့၏ သဘာဝဖြစ်ပျက် လက္ခဏာရေး သုံးပါးကို မသိနိုင် မမြင်နိုင်။
ဥပမာ ပြရလျှင် ရေကန်ထဲတွင်ရှိသော ရေသည် လှိုင်းထ၍ မငြိမ်သက် မတည်ကြည် လှုပ်ရှားနေပါက နောက်ကျိနေသောကြောင့် ရေအောက်တွင်ရှိသော အရာများကို မမြင်နိုင်။ ရေသည် တည်ကြည်မှသာလျှင် ရေအောက်တွင်ရှိသော အရာများကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်သည်။ (တည်တည်တံ့တံ့ ရှိမှ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိမည်။ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိမှ ရှင်းရှင်းလင်လင် မြင်မည်။ ထိုကြောင့် တည်ကြည်မှ ရှင်းလင်းမည်။)
ထိုကြောင့် သမာဓိလှေကားထစ်ကို မနင်းဘဲ ထိုထက်မြင့်သော ပညာလှေကားထစ်ကို မတက်လှမ်းနိုင်။
သီလလှေခါးထစ်လည်း မရှိ၊ သမာဓိလှေခါးထစ်ကား နတ္ထိ၊ သို့သော် ပညာသာသနာကိုသာ ဖြည့်ကျင့်နေပါလျှင် အဘယ်မှာ ပေါက်မြောက်နိုင်မည်နည်း။ (၀ီရိယအကျိုးကိုတော့ ရရှိနိုင်မည်။) ပညာလှေခါးထစ်ကိုရောက်ဖို့ရာ ဝေးလေစွ။
Posted by TeaLand at 7:56 PM3comments
Posted by TeaLand at 8:06 AM 1 comments
ကိုရင် ဦးဇင်း ပညာရေး
ဒီစာမေးပွဲကို ပထမဦးဆုံး မန္တလေးမှာရှိတဲ့ သကျသီဟအသင်းက စတင်ကျင်းပတာ။
ပြဋ္ဌာန်းစာကို တောင်မြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး ရေးဆွဲပေးတာလို့ သိရတယ်။
ပထမဆင့်၊ ဒုတိယဆင့်၊ တတိယဆင့်ဆိုပြီး သုံးဆင့်ခွဲထားတယ်။
သဂြိုဟ်နဲ့ သဒ္ဒါလဲ အတော်သိသွာပြီ။
သာသနာရေးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပနေတဲ့ ပဌမပြန်စာမေးပွဲပြဌာန်းစာတွေကို
ဒီသာမဏေကျော်စာမေးပွဲက ပြဌာန်းစာတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး
ပြင်သင့်တာပြင်၊ ထည့်သင့်တာထည့်ကာ သင်တန်းနှစ်ကို
(၃ နှစ်မဟုတ်ပဲ ၇ နှစ်လောက်အထိ) တိုးချဲ့သတ်မှတ်လိုက်ရင်
မြန်မာပြည် ရဟန်းသာမဏေတို့ ပညာရေးစနစ်
ဒီထက် အများကြီး ကောင်းလာနိုင်တယ် လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ဒီခေတ်ကာလနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ရှိမရှိ စီစစ်သင့်ပြီ။
ခေတ်နှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ပြင်သင့်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကို ပြင်ပြီး
ထည့်သင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလို ပထ၀ီလို ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းလို
ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကာယကံရှင်တို့ အသိဆုံး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကျော်က မြန်မာပြည်မှာ ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်တွေ
ဘာအကူအညီပေးရမလဲ လို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးများက (ပါးစပ်ကိုတိပ်ဖြင့် ပိတ်ထားသည့်ပမာ) ဘာမျှပြန်မပြော။
ပြန်လဲ မပြောတတ်။ ပြန်ပြောရအောင် နားလဲ မလည်။
သို့နှင့် ကိုရင်လေးတွေက ပါဠိဘာသာစကားနဲ့ ပြောင်းပြီး ပြောပြန်တယ်တဲ့။
ဒို့ဆရာတော်ကြီးများကတော့ ပါဠိလိုလဲ တစ်ခွန်းမျှ ပြန်မပြောတတ်ချေ။
အလေ့အကျင့်လဲ မရှိ၊ အသံထွက်ကလဲ မတူတော့
ပါဠိလို ပြောနေတယ်လို့တောင် ထင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီလိုဖြစ်တာ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့်ဆိုတာ သူလဲ သိ၊ ကိုယ်လဲ သိ။
နို့၊ ဘာလို့ ဒီဘာသာစကားကို မျိုးဆက်သစ်ရဟန်းသာမဏေများ
မပြောတတ် မဖြစ်ရအောင် ယနေ့အထိ ပထမပြန် ပြဌာန်းစာထဲမှာ
စဉ်းစားသင့်ပြီ၊ ပြုပြင်သင့်ပြီ၊ အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပြီ။
စာမူတောင်းလို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဒီလိုခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးပို့လိုက်တယ်။
သာသနာတော် (တကယ်) ထွန်းကားပြန့်ပွါးလိုလျှင်
မြန်မာပြည် ရဟန်းသံဃာတော် ပညာရေးမူအတိုင်း
ပထမကြီးတန်းအောင်လို့ သာသနာ့တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ဖြေဆိုကာ
အဲ့တက္ကသိုလ်မှာပဲ မဟာတန်းတက်ခွင့်ရလို့ ဆက်တက်ဖြစ်တယ်။
(၂) နှစ်ဆက်တက်ပြီး ကျမ်းပြုတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုရကကျင်းပတဲ့ ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲဝင်ဖြေတာ
ဒီတော့ မြန်မာပြည် ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ပညာရေးကို
လုံးစိပါဌ်စိမသိတောင် အတော်အသင့် နားလည်ခဲ့တယ် လို့ ပြောလို့ရတယ်။
မြန်မာပြည် ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ
(အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်) ပထမငယ်တန်း၊ ပထမလတ်တန်း၊ ပထမကြီးတန်း၊
ဓမ္မာစရိယတန်း ဆိုပြီး အတန်း (၄) တန်းပဲ ရှိတယ်။
အတန်းက သာ (၄) တန်းပဲ ရှိတာ။
(၁၀) နှစ်လောက်ကြာအောင် သင်ယူရတယ်။
ဒီအတန်း (၄) တန်းကို (၄) နှစ်နဲ့ အောင်မြင်ဘို့ မလွယ်ပါဘူး။
၄ နှစ်နဲ့ အောင်သွားတဲ့ရဟန်းတော် မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။
ရဟန်းသံဃာတော်အများစု ၁၀ - နှစ်လောက်ကြာအောင် သင်ယူရနေတဲ့
ဒီအတန်း (၄) တန်းကို ဘာလို့များ အတန်းတိုးပြီး မထားနိုင်ရတာလဲ။
ဘာလို့များ အတန်း (၄) တန်းထဲ သတ်မှတ်ထားရတာလဲ။
မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ဒီကိစ္စ ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးရမှာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ရဟန်းသံဃာတော်များပညာရေး ပြဌာန်းစာမှာ
ပါဠိဘာသာ (Language) နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (Subject) ရောထွေးနေတယ်။
ရောရောထွေးထွေး သင်ပေး သင်ယူနေရတာ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သင်ပေးနေတဲ့ စာချဆရာတော်အများစုက
ပါဠိဘာသာပိုင်း (Language) နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအရာပိုင်း (Subject) ကို ဓမ္မာစရိယတန်းရောက်တဲ့အထိ ခွဲခွဲခြားခြား ပြောမပြဘူး။
အားနည်းတယ်လို့ ပြောမယ်ဆို ပိုမှန်နိုင်တယ်။
ဗုဒ္ဓအကြောင်း၊ ကံ ကံ၏အကျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊
စီးပွါးရေးအမြင် စသည်၊ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ် လမ်းစဉ်စတဲ့
အကြောင်းအရာတွေကို နည်းနည်းလေးမှ ပြဌာန်း စာထဲမှာ မတွေ့ရဘူး။
စာတတ်လူမိုက် (ပညာတတ်လူမိုက်) တွေဖြစ်လာတယ်။
ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်ပြီးသားဦးဇင်းတွေ ဓမ္မာစရိယတန်းမှာ သင်ရတဲ့
သာမညဖလသုတ်၊ အမ္ဗဋ္ဌသုတ်အကြောင်းတွေကို မပြောပြတတ်တာပဲ။
နောက်ပြီး ရဟန်းသံဃာတော်များပညာရေး ပြဌာန်းစာမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သမိုင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်း၊
ဒီဘာသာရပ်ဟာ ရဟန်းတော်တိုင်း သိသင့်တဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့ သင်ကြားနေတဲ့ အဋ္ဌကထာစာအုပ် (သို့) ဋီ့ကာစာအုပ်ကို
ဘယ်ခေတ်က၊ ဘယ်ရာစုက၊ ဘယ်ခုနစ်ခန့်က ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က
ဘယ်ဆရာတော်နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဆရာတော်က ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိသင့်တာပေါ့။
ဥပမာ၊ ပုဂံခေတ်က သာသနာရေးအခြေအနေ၊
စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သာသနာပြုရဟန်းတော်တွေ သိကို သိရပါမယ်။
ဒါမှသာ သာသနာပြုရာမှာ ခရီးရောက်ပါမယ်။
သမိုင်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအကြောင်းလည်းပါကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအကြောင်းထဲမှာ
တပုဿနဲ့ ဘလ္လိကကုန်သည်ညီနောင် တို့ပါကြောင်း၊
ကုန်ရောင်းဝယ်ရင်း ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရာ သူတို့နှစ်ဦးဟာ
ဒီလို အဦးဆုံး သရဏဂုံဆောက်တည်ရမှာ
သမိုင်းကို သင်တော့ သမိုင်းထဲက အကြောင်းအရာတွေကို
စူးစမ်းတတ်တဲ့ ဒီသီဟိုဠ်ကိုရင်လေးကို ချီးကျူးရမှာပါ။
သီရိလင်္ကာကိုရင်လေး က စူးစမ်းတဲ့သဘောလေးပါ။
မြန်မာကိုရင်၊ ဦးဇင်းများလည်း ဒီလို စူးစမ်းမှုလေးတွေနဲ့
အမှန်တရားကို ရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်အောင် ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကို
အတန်းတိုင်းမှာ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဟန်းသံဃာတော်များပညာရေးအားနည်းချက်တစ်ခုက
စာသင်သား တပည့်တွေ မရှင်းလင်းတာကို မေးခွင့် ပေးမထားဘူး။
“ကဲ၊ တော်ပြီ” လောက်ပြောပြီး စာအုပ်ပိတ်၊ သူ့အခန်းထဲ ၀င်သွားတော့တာပဲ။
စာသင်သား နားလည်လည် မလည်လည် သူနဲ့ မဆိုင်သလိုဘဲ။
တကယ်တော့ စာချချိန် တစ်နာရီဆိုရင် တစ်နာရီအပြည့်မချဘဲ
မိနစ် (၅၀) လောက်သာ ပို့ချသင့်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ (၁၀) မိနစ်ကို စာသင်သားတွေ မရှင်းတာမေးဘို့ ချန်ထားသင့်တယ်။
ဒီလိုအလေ့အထမရှိတော့ မြန်မာပြည်မှာ စာသင်ပြီး ဓမ္မာစရိယဘွဲ့တွေသာ ရတယ်။
စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ တိုးတက်မှု နည်းပါးတာကို တွေ့ရတယ်။
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ခွင့် ပေးမထားဘူး။
ဒါကို ဒီလိုမှတ်၊ ဒီလိုဖြေနဲ့ ပီးတော့တာပဲ။
စာသင်သားတွေရဲ့ သံသယဆူးညောင့်တွေကို နှုတ်မပေးကြဘူး။
ဆရာကဆို တပည့်က နောက်က လိုက်ရေးရတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြားမှာ
ကိုယ်သံသယရှိတာ မရှင်းတာကို ထမမေးရဲဘူး။
မရှင်းတာမေးရင် ဆရာသမားတွေကို မရိုသေရာရောက်တယ်၊
ဘုကန့်လန့်လုပ် တယ်လို့ အယူရှိတဲ့ စာချဆရာတော်တွေထံမှောက်မှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သံသယတွေကို (အောင့်အီး) မြိုချရင်း
မြန်မာရဟန်းတော်များ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရေး အဖတ် အပြော တတ်မြောက်ထားဘို့ပါပဲ။ သိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ရင်
အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးတွေမှာကို အဆင်ပြေဘို့ မလွယ်ဘူး။
တချို့ နိုင်ငံခြားကို အလည်လာတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများလည်း
ဒီအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်ပုံတွေ အမျိုးမျိုးကြားနေရတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့ သူ့တပည့်ဦးဇင်းလေး အကူအညီနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို အလည်သွားတယ်တဲ့။
ဆရာတော်နဲ့ ဦးဇင်းလေး ဘာအစာမကြေဖြစ်တယ် မသိဘူး။
ဦးဇင်းလေးက ဆရာတော့်ကို မြို့လည်ခေါင် ရထားဘူတာရုံနားမှာ ပစ်ထားခဲ့တယ်။
ဆရာတော်က မြန်မာစကားက လွဲလို့ ဘာစကားမှ မပြောတတ်တော့
သူများနိုင်ငံမှာ အခက်တွေ့ တော့တာပေါ့။
နောက်ဆုံး ဘာမှ ကြံရာမရတော့ ရထားဘူတာက ထွက်လာတဲ့
“မြန်မာများ ပါကြပါသလားခင်ဗျား၊ မြန်မာများ ပါကြပါသလားခင်ဗျား” လို့
မြန်မာစာသင်သားရဟန်း၊ သာမဏေများ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ အမြင်ကို
၂၀၁၀၊ ဧပြီလထုတ် အပ္ပမာဒမဂ္ဂဇင်းမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံတန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးလိုကြောင်း၊
လမ်းဘေးချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ဖတ်တတ်ရုံ ရည်ရွယ်တာလား၊
နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စကားပြောတတ်ရုံလောက် ရည်ရွယ်တာလား၊
ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကမ္ဘာအထိကျယ်ပြန့်သွားအောင်
အင်္ဂလိပ်စာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတာကို ဘာမျှ မပြောလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို ကမ္ဘာအထိသိအောင်၊
ကျယ်ပြန့်သွားအောင်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ဆိုရင်တော့
ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာအသွားအလာကို ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်မြင်တဲ့အထိ
မြန်မာနိုင်ငံက သင်ကြားနည်းစနစ်နဲ့ ကျကျနနသင်စေချင်တယ်။
ပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတာက ပိုကောင်းမယ်။
တကယ်စိတ်ဝင် စားတယ်၊ ဥာဏ်အသင့် အတင့်ရှိတယ်ဆိုရင်
အသက် (၃၀) ကျော်ဝန်းကျင်လောက်မှာ
အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။” တဲ့။
သူပြောခဲ့တဲ့ အထက်ပါစကားတွေ ထဲမှာ မရှင်းမလင်းတာတွေပါနေတယ်။
ဥပမာ၊ လမ်းဘေးချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ဖတ်တတ်ရုံ ရည်ရွယ်တာလား၊
သိသွားအောင် ဆောင်ရွက်ချင်တာလား ဆိုတဲ့ သူ့စကား။
ဆရာတော်အနေနဲ့ ဒီလို မေးစရာမလိုဘူးလို့ယူဆတယ်။
ကိုရင် (သို့) ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အင်္ဂလိပ်စာသင်းပေး၊ သင်ယူကတည်းက
ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကမ္ဘာအထိ ကျယ်ပြန့် သွားအောင်
ဒီလို ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ သင်ပေးသင်ယူသွားရင်းနဲ့ပဲ
လမ်းဘေးက ဆိုင်းဘုတ်တေကို ဖတ်တတ်မှာဖြစ်ပြီး
နိုင်ငံခြားသား တွေနဲ့ စကားပြောတတ်လာမှာပါ။
အင်္ဂလိပ်စာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတာကို ဘာမျှ မပြောလိုပါဘူး” လို့ ဆိုတယ်။
ဒါက ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတာဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောတတ်ဖို့၊ ရေးတတ်ဖို့၊ ဖတ်တတ်ဖို့ပါပဲ။
ဆိုင်းဘုတ်ကိုပဲ ဖတ်ရ ဖတ်ရ၊ သတင်းစာကိုပဲ ဖတ်ရ ဖတ်ရ၊
ပိဋကတ်စာပေကိုပဲ ဖတ်ရ ဖတ်ရ၊ ဖတ်တတ်ဖို့ပါပဲ။
တရုတ်လူမျိုးနဲ့ပြောရ ပြောရ၊ ကုလားလူမျိုးနဲ့ ပြောရ ပြောရ၊ ပြောတတ်ဖို့ပါပဲ။
“ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို ကမ္ဘာအထိ သိအောင်၊ ကျယ်ပြန့်သွားအောင် လုပ်ဖို့
ပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတာက ပိုကောင်းမယ်” တဲ့။
ဆရာတော်က အခြေခံတန်းတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို မပြဋ္ဌာန်းစေလိုဘူး။
၀ါ - အခြေခံတန်း စာသင်သားတွေကို
အင်္ဂလိပ်စာ မသင်ကြနဲ့လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
အခြေခံတန်းမှာကတည်းက သူ့အရွယ် သူ့အဆင့်နဲ့အညီ သိသင့်တဲ့
အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကို ပြဋ္ဌာန်းပေးပြီး သင်ကြားပေး ထားသင့်တယ်။
ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပါဠိစာပေဖက်မှာ အားနည်းသွားမယ်လို့တော့
အင်္ဂလိပ်စာ မသင်ရလဲ ပါဠိစာပေ အားနည်းချင် နည်းနေတာပဲ မဟုတ်လား။
တော်တဲ့လူက တော်တာပါပဲ။ ညံ့တဲ့လူက ညံ့နေတာပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူစေချင်တယ် ဆိုတော့
အတန်းပြဋ္ဌာန်းစာထဲမှာ မထည့်သွင်းပဲနဲ့ အလွတ်သင်ယူစေချင်တဲ့
ဆရာတော်ရဲ့ ဒီအမြင်ဟာ ယေဘုယျမဆန်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။
ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဓမ္မာစရိယတန်းကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ အချိန်တွေ အများကြီးရတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အများစုက အသက် ၃၀ လောက်မှ ဓမ္မာစရိယတန်းကို အောင်ကြတာ။ ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်ပြီးရင်လဲ စာသင်တိုက်အများစုက လက်ခံချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။
ဆိုတော့ အသက်လဲကြီး နေစရာလဲ အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ အခွင့်အရေး အတော့်ကို နည်းသွားပါပြီ။
ပြဋ္ဌာန်းစာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး သင်ယူစေချင်တာ။
ပိဋကတ်စာပေတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီး
ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်ပီးတာနဲ့ မိမိတို့ ကျောင်းထိုင်မဲ့ နေရာအသီးသီးမှာ
(၁၀) တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေကို
လမ်းဘေးကဆိုင်းဘုတ်တွေ လမ်းညွှန်တွေကို ဖတ်တတ်လာပြီး
ကိုယ့်နိုင်ငံက ရဟန်းတော်များ ထူးထူးချွန်ချွန်သာသနာပြုနိုင်အောင်
ပါဠိစာပေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းရော၊ အင်္ဂလိပ်စာရော
ပြဋ္ဌာန်းစာထဲမှာ ထည့်ပြီး သင်ကြားပေးစေချင်တာပါ။
(မန်း သာသနာ့တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် ရေးထားတာပါ)
ဓမ္မဂါဒင်း မှ ကူးယူသည်။
Posted by TeaLand at 9:12 PM 1 comments
ညောင်တုန်း-ဆရာတော်ဦးဇောတိက (သာမာန်လိုဟောပေမဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တရားဟောနည်းသစ်)
ဆရာ့ဂုဏ်အင် နေ့စဉ်ပူဇော် ဖူးမြော်ပါ၏
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင်ဆရာတော်ကြီး၏ ပုံရိပ်များ
1) - နံနက်အိပ်ယာထထချင်းတွင် ရေ ၂ ဖန်ခွက်သောက်ပါ။
ကိုယ်အတွင်းရှိ ကလီစာများအား နိုးရာတွင် အဆင်ပြေပါသည်။
2) - အစာမစားမီ မိနစ် ၃၀ ခန့်အလိုတွင် ရေ တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။ အစာကြေလွယ်သည်။
3) - ရေမချိုးမီ မိနစ် ၃၀ ခန့်အလိုတွင် ရေ တစ်ဖန်ခွက် သောက်ပါ။
4) - မအိပ်မီ ရေ တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
စာရေးရတာ တီထွင်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ စွန့်စားလိုစိတ် ခရီးထွက်ပြိးစူးစမ်းလိုစိတ်မှာ ပျော်မွေ့တယ်။ သာပေါင်းညာစား အရွံရှာဆုံးဗျာ။ ၆-နှစ်သားကတည်းကလေ မွေးရပ်မြေကိုစွန့်၊ မြို့တော်မှာ ပညာသင်ဖို့ ဘကြီးဘုန်းကြီးက ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပညာသင်တာ သူများလိမ်တာ မခံရအောင်၊ ဘယ်သူတွေက လူလိမ်လဲဆိုတာ သိအောင်၊ စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့။ ဒါကြောင့် မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ အရာရာတိုင်းကို ဆရာတင်ပါတယ်။ အားလုံးမှာ အစွမ်းကိုယ်စီ ရှိကြတဲ့အတွက် ကောင်းမြတ်တဲ့အစွမ်းရှိသူ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ ဒီဆောင်ပုဒ်တွေကို ကြိုက်တယ်။ မနာလိုကင်း၊ ၀န်တိုရှင်း၊ လက်ငင်းချမ်းသာသည်။ အနေလည်းကောင်း၊ စိတ်လည်းကောင်း၍၊ ကောင်းကောင်းပညာ၊ တတ်မှသာ၊ ငါဟာ ကြီးပွားမည်။ အနေမကောင်း၊ စိတ်မကောင်း၍၊ ကောင်းကောင်းပညာ၊ မတတ်ပါ၊ ငါဟာ ဆုတ်ယုတ်မည်။ ရိုးဂုဏ်ဖြောင့်ဂုဏ်၊ ယဉ်ကျေးဂုဏ်သည်၊ လူဘုံလောက၊ နှစ်သာရတည်း၊ သူက ငြူစူ၊ မကြည်ဖြူလည်း၊ ခွာယူမရ၊ ကွာမကျ။ ရွှေဂုဏ်ငွေဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ်သည်၊ လူဘုံလောက၊ အကာ မျှတည်း၊ သူကငြူစူ၊ မကြည်ဖြူက၊ ခွာယူလိုက၊ ကွာ၍ကျ။ ကိုယ့်ကုသိုလ်က၊ ကိုယ့်ဘ၀၊ မုချ မြှင့်တင် နိဗ္ဗာန်ဝင်။ စသည် စသည်....................
ဗဟုသုတ တိုးပွားစေဖို့အတွက် ဟိုဝက်ဆိုဒ် ဒီဝက်ဆိုဒ်တွေကို လိုက်ဖတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖတ်နေရင်းကနေ တချို့တင်ပြတဲ့ပိုစ်တွေဟာ ဒိုင်ယာယီနဲ့ ရေးမှတ်ထားချင်လောက်အောင်ကို ကောင်းနေတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အဲလိုရေးမှတ်ထားမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ခုခေတ်အခါကျတော့ ခေတ်သစ်နည်းနဲ့ ဘလော့လုပ်ပြီးမှတ်စုလုပ်ထားလိုက်ရင် ရောက်ရာမြို့မှာ ဖွင့်ကြည့်နိုင်သလို ကိုယ့်မှတ်စုကိုလည်း ယူဖတ်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖွင့်ကြည့်နိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုဆိုဒ် ဒီဆိုဒ်တွေကို ဖတ်ပြီး အလဟဿမဖြစ်အောင်၊ ကိုယ့်နှင့်ဝါသနာတူသူများကိုလည်း လွယ်ကူစွာဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး တတ်သိတဲ့ဘလော့ပညာအနည်းငယ်နဲ့ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပိုစ်တင်ဖို့ထက် ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ အများအကျိုးရှိမယ်ထင်တဲ့ပိုစ်တွေ ကို ကူယူပြီး တင်ဖြစ်တာက များမယ်။......................။
လှုပ်ရှာမူရာ ဖြစ်တိုင်းမှာ မှန်စွာသတိရှိ၍ သိရမည်။
ကြံစည်တွေးရာ ကြံတိုင်းမှာ မှန်စွာသတိရှိ၍ သိရမည်။
ကောင်းဆိုလတ်ပါ ခံစာတာ မှန်စွာသတိရှိ၍ သိရမည်။
သဘောမှုရာ ဖြစ်တိုင်းမှာ မှန်စွာသတိရှိ၍ သိရမည်။
အိုခြင်းရှိရာ ဤခန္ဓာ အိုတာမလွန်နိူင်။
နာခြင်းရှိရာ ဤခန္ဓာ နာတာမလွန်နိူင်။
သေခြင်းရှိရာ ဤခန္ဓာ သေတာမလွန်နိူင်။
အိုနာသေရာ လွတ်အောင်မှာ ပွားကြမဂ္ဂင်နိူင်။
မဂ္ဂင်ပွားမှ လွန်နိူင်ကြ ဘ၀ချမ်းသာနိူင်။
Posted by ဦးကော (ရွှေစေတီ)
ကျေးဇူးတော်ရှင် ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီး
သူမှန်ရင်လည်း ၀မ်းသာလိုက်ပါ။ သူမှားရင်လည်း သနားလိုက်ပါ။ မှားမှားမှန်မှန် ကုသိုလ်ပွားပါစေ။
မေတ္တာဆိုတာ သူတစ်ပါးအကျိုးကို ရှေ့ရှုတာ။ ကိုယ့်အကျိုး မပါ။ ကိုယ့်အကျိုး ပါနေရင်း မျှော်လင့်နေရင်း မေတ္တာမမည်။
PNS - JAPAN
TA ANG YOUTH
Latest Activity on Cherry Palaung
Chiang Mai Mall, Chiang Mai, Thailand - The Hill Tribes - The Lua and Palaung
Post Update ဖြစ်သောဘလော့
မျိုးဆက်သစ်မှတ်တိုင်(MYO SET THIT MHAT TAING)
Dhammaduta Ashin Dr.Pannyissara's Official Website
Save the Aged People
Latest Activity on Myanmar Theravada Buddhists' Group
คลิป Palaung People in Thailand \_(^o^)/ RuamMid.com™
Music listen, music lyrics - Demo Music
သြော်....လူ့ပြည်လောက လူ့ဘ၀ကား အိုရနာရ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည်း။ သို့တပြီးကား..... သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည်၊ အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်၏မျိုးသား၊ စာစကားလည်း ကြီးပွားတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်ဦးချ၍ အမျှဝေရာ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဥာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်းလျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
စိတ္တေ ပသန္နေ၊ လောဟိတေ ပသီဒတိ။ စိတ်သည် ကြည်လင်လတ်သော် အသွေးအသားတို့သည် ကြည်လင်ကုန်၏။ ကာမဘုံသား၊ နတ်လူများတို့ ကောင်းစားပြည့်ဝ၊ ဘေးရန်ပလျက်၊ အိပ်နိုးချမ်းသာ၊ နေလိုပါလည်း၊ ဣဿာမေစ္ဆ၊ သူရှုပ်ပွေ၍၊ ထင်ချေ မကျ၊ ဆင်းရဲ ရ၏။
Palaung People in Thailand
ဗုဒ္ဒါနံ ဇီဝိတဿ ၊ သဗ္ဗညုတညာဏဿ ၊ စတုန္နံ ပစ္စယာနံ ၊ အသီတိယာ အနုဗျဉ္ဇနာန၊ န သက္ကာ အန္တရာယော ကာတုံ တထာမေဟောတု. Simple theme. Powered by Blogger.